Fampiroboroana ny teny frantsay :: Nahazo «Alliance française» eny Ambohitrimanjaka • AoRaha
Fampiroboroana ny teny frantsay Nahazo «Alliance française» eny Ambohitrimanjaka
Hoentina hamaliana ny hetahetan’ireo mponina ao Ambohitrimanjaka, noto­kanana omaly alakamisy ny efitrano vaovaon’ny Alliance française, napetraka ao an-toerana. Atrikasa maro isan-karazany no azo atao ao, anisan’izany ny famakiam-boky, sy ireo seho ara-java­kanto maro samihafa, ary ireo hetsika rehetra momban’ny literatiora.
« Ny fampiroboroboana ny teny frantsay sy ny hitohi­zan’ny fifanakalozana ara-kolotoraly eo amin’ireo vahiny sy ny Malagasy no tanjona amin’izany » hoy i Jean-Paul Clément, tompon’andraikitra voalohany ao anivon’ny Alliance française, eto Antananarivo.
Ankoatra izay, efa vonona handray avy hatrany ireo mpianatra, na olona hafa te hiditra ho mpikambana vaovao ry zareo ao an-toerana. Tsahi­vina fa efa nisokatra sy niasa ara-dalàna ity efitrano ity tany amin’ny taona 2016 tany, saingy nisy ny fandaminana natao ka voatery nakatona izany, ary izao indray vao naverina nosokafana.
Kolontsaina • Pejy manokana
Fiainana mpanakanto Vakian-dRaboussa ny hevi-diso matetika araikitra amin’ny mpanao rap
Toeram-pandefasana sarimihetsika vaovao Hanome ainga vao ny fankafizana horonantsary anaty efitrano ny Canal Olympia Iarivo
Fara West Faravohitra “Jazz Fusion” lalaovin’i Antsiva sy ny namany
CGM Analakely Tokiky ranoiray hoentin’i Finengo Mahasaky
Kolotsaina sy fampandrosoana :: Fitaovana ahafahana manandratra ny maha Malagasy ny asa fanaovan-gazety
Mpanakanton’ny feo tokana gitara iray :: Hanamafy ny tady mampifamatotra azy amin’ny mpankafy i Mamina